मंसिर सकिएपछि तनावमा केकीः भन्छिन्- भनेजस्तो युवक पाएकै छैन ! हेर्नुहोस फोटो फिचर सहित - Man Xune Kura
मंसिर सकिएपछि तनावमा केकीः भन्छिन्- भनेजस्तो युवक पाएकै छैन ! हेर्नुहोस फोटो फिचर सहित
केकी अधिकारी नेपालकी ‘मस्ट एलिगेबल ब्याचलर’ हुन् । उनी बिहेको लागि योग्य छिन् । मंसिर सकियो । नेपाली समाजमा मंसिरलाई बिहेको सिजन पनि मानिन्छ । यस्तोमा अविवाहित युवती र सेलेव्रिटीलाई बिहेको लागि आउने दबाब र प्रस्ताव नयाँ कुरा होइन ।
फिल्मसँगै पछिल्लो समय टेलिभिजन कार्यक्रम उत्पादनमा पनि व्यस्त केकी रिलेसनसिपमा रहेको गाइँगुइँ नचलेको पनि होइन । तर, उनले यसलाई सार्वजनिकरुपमा स्वीकारेकी छैनन् ।
केकीको बिहे योजना कस्तो छ ? बिहेलाई लिएर उनी के सोचिरहेकी छिन् ? मंसिरको अन्तिम दिन बुधबार सामाजिक संजालमा उनले केही आकर्षत तस्बिर पोस्ट गरेकी छिन् र विडिङ सिजनको साथमा पहेँलो रङको इमोजी पनि उल्लेख गरेकी छन् ।
केकीलाई मंसिर सकिन लागेकोमो चिन्ता हो या उनी आगामी बिहेको सिजनहरुमा आफूलाई सिंगलबाट मिंगल तुल्याउन चाहन्छिन् । प्रायः मिडियाले बिहे कहिले गर्ने भनेर केकीलाई सँधै एउटै प्रश्नले हत्तु बनाउँछन् । उनको रेडिमेड जवाफ हुने गर्छ : भनेजस्तो युवक नै पाएको छैन । भन्नुको अर्थ, केकी मन मिल्ने पाटर्नरको खोजीमा छिन् र निकट भविष्यमा मिंगल हुने उनको चाहना छ ।
Previous: माछा किन्दा सिडिओ ठगिएपछि …..
Next: अस्ट्रियामा अरुको सहयोगमा आत्महत्या गर्न पाइने कानुन कार्यान्वयनमा